Isu tisingabatsiri vechidiki rubatsiro rwakawanikwa muSheffield, kuunza hutungamiri, hutano hwehupfumi uye mapurogiramu epambani kune vechidiki nevanhu vakuru vanotambura. Tinova nechinangwa chekupa simba vechidiki kuti vaite shanduko yakanaka mumharaunda yavo, kusimudzira zvido zvavo uye vave mienzaniso yevezera ravo.
Iwe wakwegura 15 - 17 uye unotarisa kuti uwane zvakanyanya kubva muzhizha rako?
Join Join NCS for a great experience! Sangana nevanhu vatsva, edza shamwari dzenguva refu uye uwane unyanzvi hutsva hweCV yako.
Tsvaga zvakawanda pamusoro peCSS
Dzidza pamusoro pezvimwe zviitiko zvevanhu
Une mwana kana mwanasikana here, kana uri kutarisira wechidiki?
Tsvaga kuti chirongwa che 2019 NCS chikavapa sei zhizha uye techniti havazokanganwi.
FAQ pamusoro pezvakaitika
Zvinodhura zvishoma pane zvaungafunga
Zvikoro uye Vadzidzisi
Uri mumwe munhu anoshanda nevaduku here?
Tsvaga kuti chirongwa cheNCS chinogona sei kuvatsanangurira zviitiko zvitsva, kuvandudza unyanzvi hutsva nekuita shamwari itsva, dzehupenyu.
Mamwe mashoko pamusoro pedu
Nguva dzekugara uye nguva dzekugara
Tine 3 midzidziso yekutenda
Nekutsigirwa uye kuzvitenda, vechidiki vanogona kuwana zvisingatenderwi
Sechirongwa chechidiki chatinoziva kuti chakapiwa zvishandiso zvakanaka, nzvimbo uye rutsigiro, izvo zvisingatendi zvinobudirira.
Mamwe mienzaniso yevechidiki vanhu vanoita zvisingadikanwi neElement Society inosanganisira: prototyping gym bags, kutengeserana pamashamba emisika, kugadzira uye kuita masangano, kurwisa kushungurudzika nekusarura, kurwisana nekusvibiswa kwevakaremara nekudaro, nezvimwe zvakawanda. Chii chichakurova iwe ndechekuti izvi zvinokwidziridzwa hazvisi kungoenderana nechetsika 'kubudirira kwepamusoro' asi nevose.
Kupa vechidiki vane simba rechokwadi kutora chiito chakanaka munharaunda yavo
Tiri kugara tichitanga mapurogiramu matsva ekuvandudza zvinhu zvose zvevanhu. Vechidiki vari pamwoyo wezviitiko zvedu zvose zvitsva sevechidiki rubatsiro.
Mimwe yemapurogiramu edu akagadzirwa nevaduku veSheffield neSouth Yorkshire. Kunyangwe mamwe mapurogiramu edu ane vechidiki vanofambira mberi kubva kune vatori vechikamu vachibhadhara mabasa. Yese yemapurogiramu edu ane vechidiki vanobatanidzwa pane imwe nhanho - kubva pakufungisisa nekugadzirwa, kusvika kune uye kuongorora.
Kukurudzira vechidiki kuti vave mienzaniso yakanaka kune avo vakavapoteredza
Kuziva kuti vezera ravo vane mienzaniso inesimba rakasimba mukukudziridza vamwe vechidiki chinhu chinokosha kune dzimwe nzira dzedu.
Sezvo zvakadaro tinopa mukana uye mukana wekupa rubatsiro kune rudo mune mabasa apo vanogona kunge vari mienzaniso yakanaka. Izvi zvinosanganisira kuva nhengo yeBhuku redu revechidiki iro rinogadzira nzira ye sangano uye kutungamirirwa kwemapurogiramu edu. Iyi ndeimwe yenzira dzakawanda isu tiri kuisa mitemo yepamusoro-shandiso sevechidiki rubatsiro.
Kana iwe uchigoverana maonero edu uye zvisingadi kuti tive nechinangwa chekuti tive nemigumisiro yakanaka munyika, tapota pindai mukutaura. Tiudzei pamusoro pemafungiro ako uye chiitiko chako, iwe unoda kushanda nesu pane chimwe chinhu chauri kuita, kana kwatiri pane chimwe chinhu chatiri kuita.
Danai isu - 0114 2999 210
Vashandi nevatsigiri vanosanganisira:
EFL TRUST // NCS TRUST // CABINET OFFICE // SHEFFIELD FUTURES // BIG LOTTERY // ZVOKWADI NEET // SHEFFIELD HALLAM // UNIVERSITY YASHEFFIELD